Vavaka hanoherana ny fanafihana ara-panahy | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka hanoherana ny fanafihana ara-panahy
Salamo 35: 1-8:
1 Mifona aminao aho, ry Iaveh, amin'ireo miady amiko: miadia amin'izay mamely ahy. 2 Raiso ny ampinga sy ny ampinga, ka mitsangàna hamonjy ahy. 3 Ary raiso ny lefona, ary ajanony ny lalana manenjika ahy; lazao amin'ny fanahiko hoe: Famonjeko ianao. 4 Aoka ho menatra sy hangaihay izay mitady ny aiko; aoka hiamboho sy hangaihay izay misaina hanisy ratsy ahy izy. 5 Aoka ho tahaka ny akofa eo alohan'ny rivotra izy, ary aoka ny Anjelin'i Jehovah hanenjika azy. 6 Aoka ho maizina sy malama ny lalany, ary aoka ny Anjelin'i Jehovah hanenjika azy. 7 Fa tsy ahoan-tsy ahoana no nanafenany ny haratony tao anaty lavaka, izay nihady ho an'ny aiko. 8 Aoka ny fandringanana ho tonga aminy tampoka; ary aoka ny fandrika harerany no hahatratra azy;
Ny zanak'Andriamanitra tsirairay dia tsy maintsy miomana amin'ny fiomanana. Fanafihana ara-panahy marina, tsy misy kristiana tsy mahalala izay mino fa ny devoly dia tsy taorian'ny fiainany. Fanafihana ara-panahy isan'andro zana-tsipìka satana kendrena amin'ireo zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny tanjona hamotika azy ireo ara-batana sy ara-panahy. Androany dia nanangona vavaka 30 aho hanohitra ny fanafihana ara-panahy. Ny fomba tsara indrindra handresena amin'ny ady dia ny manafika, ny ankamaroan'ny Kristiana dia eo amin'ny lafiny fiarovan-tena hatrany amin'ny fanafihana ara-panahy, tsy izany no tsara indrindra, tsy tokony hiaro amin'ny fahavalo fotsiny isika, fa koa hanafika ny fahavalo amin'ny sitrapo.
Amin'ny alalan'izany teboka amin'ny vavaka, izahay dia manatona ny toby ao amin'ny tobin'ny fahavalo. Hongotantsika ny voa rehetra amin'ny demonia, izay napafan'ny devoly teo amin'ny fiainantsika sy ny fianakaviantsika. Hamoaka ny liona anjely any an-tobin'ny fahavalontsika isika, hampiely sy handringana azy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ity vavaka manohitra ny fanafihana ara-panahy ity dia hampivoatra ny fahazoanao mandresy hatrany amin'ny fanjakan'ny haizina. Mamporisika anao aho hampiditra io vavaka io amin'ny fanirian'ny fonao rehetra ary hitako fa navotsotra mandrakizay tamin'ny anaran'i Jesosy ianao.
1. Raiko rehefa manao izao vavaka izao aho, manome hery ahy handresy, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Manosotra ny vavaka rehetra aho dia hivavaka amin'ny afon'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Mahazo hery avy amin'Andriamanitra handringana ny hery demonia rehetra amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ny fitaovana rehetra fandringanana, namboarina tamiko hatrany am-bohoka, roahoka amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ny mpiasa tsirairay avy amin'ny devoly, izay nanendry ny hamono ahy manokana, dia mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Tompo ô, avela ho fongana amin'ny herin'Andriamanitra ny fiarovana mafy an'ny demonia, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ny manda demonia rehetra, naorin'ny devoly, dia mandray ny kotroka
ary haringana, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ny fifandraisan'ny devoly rehetra amin'ny fiainako, mifamatotra amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ny fananana rehetra napetraky ny devoly, napetraka tao amin'ny fiainako, natsoboky ny afo, tamin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ny asa rehetra ataon'ny devoly, izay maneho amin'ny endrika fahasosorana eo amin'ny fiainako dia ho rava, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Ny fanahy rehetra ao anatin'ny fahasosorana, natolotry ny demonia amin'ny fiainako, dia mianjera sy maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Izaho dia mandà ny tsy ho sosotra noho ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ny loharanom-pahasahiranana rehetra, natao ho ahy, mandray ny afon'Andriamanitra ary malazo, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Miverina aho, ny fahagagana sy fijoroana ho vavolombelona tsara dia nesorin'ny tanako tamin'ny fanahin'ny fahasosorana, tamin'ny anarana hoe Jesosy.
15. Ny hetsika rehetra ataon'ny devoly, izay mampiseho amin'ny endrika fahakiviana eo amin'ny fiainako, dia ho malemy, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Ny fitahiana, ny fotoana sy ny fotoana tsara rehetra nariako teo noho ny fahakiviana, dia mamerina anao aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Ny zavatra rehetra ataon'ny devoly, mampiseho amin'ny endrika fandaniam-potoana, dia nalemy, amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Ny demonia rehetra dia mandany fotoana amin'ny fiainako, manala ny tananao, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Ny hery ratsy rehetra, izay namboarina tamin'ny fiainana, dia paraly ny fahalalako sy ny fotoana ananako, manala ny tananao, mandry ary maty amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Afa-tsy mpisolovava devoly, nanendrena handany ny fananako, hanala ny tananao, hianjera ary ho faty.
21. Asehonny mpandroba rehetra, voatendry hanimba ny fiainako, manala ny tananao, hianjera sy ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Miverina aho, ny taonako sisa rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Miverina aho, ny trangan-javatra rehetra sy ny fahafahako rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Mody aho, ny fananako rehetra lany tamingana, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Na iza na iza mpanimba, manimba zavatra tsara eo amin'ny fiainako amin'ny faran'ny fisehoany, dia mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Izay herin'ny mpandrava rehetra, izay manapaka ny fahitana sy nofinofy tsara eo amin'ny faran'ny fisehoana, dia miankohoka sy maty amin'ny anaran'i Jesosy
27. Na iza na iza fahefana, notendren'ilay mpandringana mba hamono zavatra tsara hatrany am-piterahana ao an-tranoko, dia mianjera sy maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Izay fahefana rehetra notendren'ny mpandrava hampihena ny fifaliako, hamaha ny fihazonanao, hianjera sy ho faty, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Ny zavatra tsara rehetra, izay nalamina tamin'ny fiainako, dia mahazo fiainana vaovao ary manomboka mitombo sy maniry, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Izay herin'ny mpandrava rehetra, voatendry hitelina ny fahatsarako toa ny fasana, natsatsika tamin'ny afo, tamin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, misaotra anao aho namaly ny vavako.
Previous lahatsoratraZava-bavaka 10 mivavaka amin'ny faharesena
Next lahatsoratraVavaka Hamaivana ny fifamatorana tsy misy fanahy
Kurotamunonye Epelle 18 Mey 2020 Amin'ny 4:01 hariva
Voatahy amin'ny vavaka nataonao aho.
Anita Jairam 26 jona 2020 Amin'ny 12:50 hariva
Salama no anarako
Azonao atao ve ny mivavaka ho ahy. Toa mahatsapa zavatra manakana ny fahombiazako amin'ny fiainana aho. Tsapako fa tahiry aho.
Bernard Bohanon 28 Janoary 2021 Tamin'ny 12:58 maraina
Nanafika ahy ny mpanelanelana amin'ny saina sasany izay miantso ny tenany hoe Monique sy Lisa avy any East Chicago, Indiana. Ahoana no hahavoa ahy ity fanafihana ratsy ity.
Mohammed Jiona 16, 2021 Ao amin'ny 8: 45 am
ny anarako dia mohammed sule izao pastora kristianina pls mivavaka ho ahy fa notafihin'ny fahavalo aho pls fanampiana
Teboka vavaka 5 hivavahana amin'ny fotoam-pahoriana
40 Mivavaka momba ny famoretana.
Teboka vavaka hanoherana ny herin'ny haizina